Android မှာသိမ်းဆည်းခြင်းနေရာလွတ်ကိုဘယ်လိုရှင်းမလဲ Gadget သတင်း
Villamandos | | အန်းဒရွိုက်, မိုဘိုင်း, tablets
Android operating system ဖြင့်စျေးကွက်သို့ရောက်ရှိနိုင်သောစမတ်ဖုန်းအများစုသည် internal GB သိုလှောင်မှုနေရာ ၁၆ GB နှင့်အထက်ရှိသည်။ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာရှိနေသေးသော်လည်း၎င်းသည်သိုလှောင်မှုပြaနာများကိုလေဖြတ်သွားစေနိုင်သည် သိုလှောင်မှုပမာဏ 8 GB နှင့်အဆုံးမဲ့ပြproblemsနာများကိုသာကမ်းလှမ်းသော Terminal များ အဲဒါကိုဆည်းပူးသောသူအပေါငျးတို့အဘို့။
ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကဤပြသနာများကိုခံစားခဲ့ရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည်စျေးကွက်ရှိလူကြိုက်အများဆုံးစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကိုစမ်းသပ်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိသော်လည်း၎င်းသည်အသုံးပြုသူသိုလှောင်မှုပမာဏ 8 GB သာအသုံးပြုနိုင်သော်လည်း၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။ "ပုံမှန် "တစ်ဝက်။ ရက်အနည်းငယ်အတွင်းငါရင်ဆိုင်ခဲ့ရသောပြproblemsနာများစွာကြောင့်ငါဤဆောင်းပါး၌သင့်အားဆက်တိုက်ပြသရန်ရေးသားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ သိုလှောင်မှုနေရာလွတ်လွတ်မြောက်ရန်အေးမြသောအကြံပေးချက်များ.
အကယ်၍ သင်မသိခဲ့ပါကအောက်ဖော်ပြပါအကြံပြုချက်များကိုဖတ်ရှု။ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ များစွာသောထုတ်ကုန်များ၊ ၎င်းတို့တွင်သိုလှောင်ရန်နေရာအလုံအလောက်မရှိသောအခါပေးပို့ခြင်းကဲ့သို့သောအရိုးရှင်းဆုံးဖြစ်သည့်အချို့သောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်ခွင့်မပြုပါ။ SMS လက်ခံရရှိခြင်းသို့မဟုတ်တရားဝင် Google အက်ပလီကေးရှင်းမှသို့မဟုတ်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ထားသောအက်ပလီကေးရှင်းအသစ်သို့မဟုတ် Google Play အတူတူဖြစ်သည်။
သင့်မှာ Android operating system ရှိတဲ့လက်ကိုင်ဖုန်း (သို့) တက်ဘလက်ရှိရင်စက္ကူနဲ့ခဲတံကိုထုတ်ပြီးဒီဆောင်းပါးမှာမင်းတွေ့ရလိမ့်မယ် နေ့စဉ်အကန့်အသတ်ဖြင့်သိုလှောင်ထားခြင်းဖြင့်သင်နေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရသောပြtheနာများကိုဖြေရှင်းခြင်း မင်းရဲ့ terminal မှာရှိတယ်
3 cache ကိုသုတ်
4 သင် download လုပ်ထားသောဖိုင်များသို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းများကိုဖျက်ပစ်ပါ
5 ရုပ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများနှင့်အခြားမာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာများကိုဖျက်ပါ
6 Cloud service ကိုသုံးပါ
7 သင်၏ဖုန်းတွင် microSD ကဒ်အထိုင်မရှိကြောင်းသေချာပါစေ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android စက်တွင်သိုလှောင်မှုနေရာလွတ်ပေးရန်ပထမဆုံးအကြံဥာဏ်သည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီး၎င်းထက်လည်းပိုသည် ကျွန်တော်အသုံးမပြုတော့သော applications များကိုဖျက်ပစ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ထပ်တူများရှိသည့်အပလီကေးရှင်းများကိုလည်းဖယ်ထုတ်နိုင်သည်။
Application တစ်ခုကို uninstall လုပ်ရန်သင်သည် Settings သို့သွားပြီး application များကိုစီမံရန် option ကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်ဖျက်သိမ်းရာကိုသတိထားပါ၊ သင်သတိမထားမိဘဲကြီးကြီးမားမားဒုက္ခရောက်နိုင်သည်။
သင်သိထားပြီးဖြစ်သောအတိုင်း၊ အချို့သော application များသည် operating system နှင့်အတူတကွထည့်သွင်းထားသောကြောင့်သာမန်နည်းလမ်းအတိုင်း uninstall လုပ်လို့မရပါ။ သို့သော်၊ လျှောက်ထားမှုအားလုံးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် ၎င်းတို့အားစနစ်အရင်းအမြစ်များကိုမသုံးစွဲစေနိုင်သည့်အပြင်၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အနိမ့်ဆုံးနေရာ၌ရှိသောကျွန်ုပ်တို့၏ terminal တွင်ရှိနေသည်ကိုသူတို့ကိုပိတ်ထားပါ သူတို့ကို disable လုပ်ပြီးကတည်းက install လုပ်ထားသော updates အားလုံးကို uninstall လုပ်နိူင်တယ်။
အကယ်၍ သင်သည်စနစ်တွင်မူလထည့်သွင်းထားသောမည်သည့် application ကိုမဆိုအသုံးပြုမည်မဟုတ်ပါက၎င်းတို့ကိုအနည်းဆုံးနေရာနှင့်စားသုံးရန်အရင်းအမြစ်များကိုမသုံးရန်၎င်းတို့ကိုပိတ်ထားပါ။
cache ကိုရှင်းလင်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အနည်းငယ်သောမကြာခဏပြုလုပ်သောအရာဖြစ်သည်၊ သို့သော်ဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်သိုလှောင်မှုပမာဏအမြောက်အမြားကိုလွှတ်ပေးနိုင်သည်.
Android operating system ၏ version 4.2 အရမည်သည့်သုံးစွဲသူမဆို cache data ကိုနောက်ဆုံးတွင်ကလစ် နှိပ်၍ မည်သည့်သုံးစွဲသူမဆို cache ကို Settings ထဲမှရှင်းလင်းပြီး Storage option ကိုသုံးနိုင်သည်။
ဤမှတ်ဉာဏ်အမျိုးအစားကိုလွတ်မြောက်စေရန်အတွက်ကဲ့သို့သောကျော်ကြားသောအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုသုံးနိုင်သည် စင်ကြယ်သောမာစတာ o CCleaner ကိုကျွန်ုပ်တို့တွင်နေရာအနည်းငယ်သာရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ခံချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းတွင်အပလီကေးရှင်းများတပ်ဆင်ရန်မဟုတ်ပါ။
သင် download လုပ်ထားသောဖိုင်များသို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းများကိုဖျက်ပစ်ပါ
များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိုဘိုင်းကိရိယာကို အသုံးပြု၍ စာရွက်စာတမ်းများကိုကူးယူရန်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတွင်ဥပမာအားဖြင့်ငွေတောင်းခံလွှာများ၊ ဘဏ်ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများသို့မဟုတ်အခြားစာရွက်စာတမ်းအမျိုးအစားများဖြစ်နိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီပစ္စည်းတွေရဲ့အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်မှာနေရာယူထားတယ်၊ ဒါကြောင့်တခါကြည့်ပြီးရင်သင်ပယ်ဖျက်လိုက်ဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်။
သူတို့ကိုသင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်စဉ်ကမဖျက်ပါကသင်အားလုံးကိုချက်ချင်းဖျက်ပစ်နိုင်သည် ဒေါင်းလုပ်များအက်ပ်မှ။ သင်အချိန်ကြာမြင့်စွာ download လုပ်ထားသောစာရွက်စာတမ်းများကိုသင်မဖျက်ပါကဖိုင်များကိုဖျက်ရန်ပြင်ဆင်သည့်အခါအာကာသပုံစံဖြင့်သင်ပျော်ရွှင်ရလိမ့်မည်။
သင်လေထဲတွင်ရိုက်သည့်ဓာတ်ပုံများ၊ မှုန်ဝါးနေသောသို့မဟုတ်သင်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်နေသည့်ဓာတ်ပုံများအားလုံးသည်နေရာများစွာယူပြီးကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြခန်းများတွင်တစ်ဒါဇင်ခန့်ရှိသည်။ သင့်စက်၏သိုလှောင်နေရာကန့်သတ်ချက်ရှိပါက ပြန်ထိုင်။ သင်မနှစ်သက်သောသို့မဟုတ်အသုံးမပြုလိုသောဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ သီချင်းများနှင့်အခြားဖိုင်များအားလုံးကိုစတင်ဖျက်ပစ်ပါ သို့မဟုတ်သင်ထပ်ခါတလဲလဲပါပြီ။
ထပ်ခါတလဲလဲပုံရိပ်များကိုရှာသောသို့မဟုတ်အလုပ်မဖြစ်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များစွာရှိသော်လည်း ထပ်မံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ခံချက်မှာနေရာအလွန်တိုသောကြောင့်သင်သိုလှောင်ရာနေရာကိုအသုံးမ ၀ င်သောနည်းဖြင့်စားသုံးမည့်အသုံးချပရိုဂရမ်များကိုမတပ်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
Cloud service ကိုသုံးပါ
Cloud သိုလှောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့ပုံရိပ်အားလုံးကိုသိုလှောင်ရန်အတွက် gigabytes အမြောက်အများကိုအခမဲ့ပေးသည်သို့မဟုတ်အလွန်နိမ့်သောဈေးနှုန်းဖြင့်ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံများကိုဤ ၀ န်ဆောင်မှုများထဲမှတစ်ခုသို့တင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပေါ်တွင်သိုလှောင်မှုပမာဏများစွာကိုလွတ်မြောက်စေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းပျောက်သွားခြင်းသို့မဟုတ်အခိုးခံရခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ပုံအားလုံးလုံခြုံစိတ်ချရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင်၏ဖုန်းတွင် microSD ကဒ်အထိုင်မရှိကြောင်းသေချာပါစေ
၎င်းသည်မိုက်မဲပုံရသည်။ သို့သော်ဤဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်အပါအဝင်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ထက်ပိုသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်း၏အတွင်းပိုင်းသိုလှောင်မှုတွင်အခက်အခဲများစွာရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်ဤဆောင်းပါး၌ထည့်သွင်းထားပါက၎င်းသည်ထိုအရာ၏ဘေးထွက်ဖြစ်သည်ကိုမသိသည်အထိဖြစ်သည် SIM ကဒ်သည် microSD ကဒ်ထည့်ရန်ဖြစ်သည်။
ထိုကွောငျ့ သိုလှောင်မှုကိုတိုးချဲ့ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါကအခြားအစီအစဉ်များမချမှီသေချာစွာစစ်ဆေးပါ ဒီကဒ်တစ်ရွက်ကနေတစ်ဆင့်၊ ငါတို့ကိုဒုက္ခတစ်မျိုးထက်မကယူဆောင်ပေးပြီးယူရိုအနည်းငယ်အတွက် ၀ ယ်နိုင်ပါတယ်။
ဤအချက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်သိုလှောင်မှုနေရာလွတ်အောင်လုပ်နိုင်သည့်နေရာနှင့်သင်၌နေရာအနည်းငယ်သာဖြစ်စေ၊ နေရာအများအပြားဖြစ်စေသင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးသင့်သည့်အကြံဥာဏ်များဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ထပ်ခါတလဲလဲပုံများသို့မဟုတ်အသုံးမကျသောဖိုင်များဖြစ်သည်။ ဘယ်သူမှအစေမခံပါနဲ့
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » Android တွင်သိုလှောင်မှုနေရာလွတ်ပေးရန်နည်းလမ်း (၇) ခု
နောက်ထပ်ပိုမိုလွယ်ကူသည့်နည်းလမ်းတစ်ခု။ သင်ဖုန်းကိုအမှိုက်ပုံးထဲပစ်ချပြီး "hard drive" ရှိပြီးနှေးကွေးသော iPhone တစ်ခုကိုဝယ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ မိုက်ကရိုဆော့ကို iphone ထဲအမြဲထည့်ထားရင်ပျက်သွားရင်ဘက်ထရီကိုဖြုတ်နိုင်တယ်။ သင်မနိုင်
သို့သော် iPhone များသည်တတ်နိုင်သောကြောင့်ဘယ်တော့မျှပိတ်ဆို့ခြင်းမခံရပါ။
ဤရွေ့ကားငါတို့ယနေ့အထိခံစားနိုင်ပါပြီ Nexus စမတ်ဖုန်းအားလုံးဖြစ်ကြသည်